यात्रा गर्नेछ ? यो पढेर मात्र हिँड्नुहोस् : अविरल वर्षाले यी १३ ठाउँमा राजमार्ग अबरुद्ध छ « Janaboli
यात्रा गर्नेछ ? यो पढेर मात्र हिँड्नुहोस् : अविरल वर्षाले यी १३ ठाउँमा राजमार्ग अबरुद्ध छ
काठमाडौं । बिहीबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न क्षेत्रका राजमार्ग अबरुद्ध बनेका छन् । सडकमा पहिरो खसेका कारण राजमार्ग अबरुद्ध बनेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालका अनुसार काभ्रेमा बीपी राजमार्गमा सवारी चल्न सकेका छैनन् भने पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तरगत सर्लाही खण्डमा बाटोमा पानी आएर साना गाडी नचल्ने अवस्थामा छन् ।
पूवपश्चिम राजमार्गकै सनुसरी रामधुनी ६ मा पनि सडक अबरुद्ध छ । धनकुटा पाख्रिवाट९७, उदयपुरको रौतामाई गाइघाट, खोटाङ हलेसी९चुवाचुङ सडकखण्ड पनि ठप्प रहेको जनाइएको छ । ओखलढुंगाको मनेमञ्ज्याङ ७, सिन्धुलीको गोलञ्चोर ५ र रामेछापको मन्थली ६ मा अबरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ललितपुरको महाकाल हेटौंडा राजमार्ग, कान्तिपथ र त्रिभुवन पथ पनि अबरुद्ध छ । लम्जुङ मनाङ राजमार्गमा पनि सवारी चल्न सकेका छैनन् । मुलुकभर बाढी र वर्षाको क्षतिका विवरण आउन थालेपछि गृह मन्त्रालयले सुरक्षा साथ बस्न सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ । गृहका अनुसार बाढी र वर्षा सम्बन्धी पूर्वसूचना सम्भावित क्षेत्रमा विहानदेखि नै एसएमएसमार्फत पठाइएको थियो ।
स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय लगायतलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा उच्च सतर्कताका साथ काम गर्न पनि गृहले निर्देशन दिएको छ । साथै, आपतकालीन उद्दारका लागि हेलिकोप्टर पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । अविरल वर्षाका कारण अहिलेसम्म मुलुकभर ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालका अनुसार बनेपा–३, नालामा भूकम्प पीडितको घरमाथि पहिरो खस्दा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते छन् । मृत्यु हुनेमा ५५ वर्षीया गोमा दंगाल र ७ वर्षीय सोहनी दंगाल छन् ।
घटनामा बुहारी ३० वर्षीया शुशिला र तीन महिने नातिनी अनुश्का घाइते छन् । रामेछापमा पनि पहिरोले पुरिएर रामपुरकी ४५ वर्षीया पदमकुमारी सुनुवारको मृत्यु भएको छ । अर्का एक जना घाइते छन् । भोजपुरमा पनि पानीको भेल घरभित्र पस्दा भत्किएको पर्खालले लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा रामप्रसाद राई गाउँपालिका–७, बासिखोराका ६६ वर्षीय जगतबहादुर राई छन् ।
टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–९, लेखर्कका १४ वर्षीय बालक जनक विकको पनि शौच गर्ने क्रममा पहिरोले चर्पीसहित पुरिएर घटनास्थलमै मृत्यु भएको स्थानीय अनिल कुमार राईले बताए । ललितपुरमा पनि अविरल वर्षाका कारण एक जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । खोटाङमा ३ जना बेपत्ता रहेका पनि जनाइएको छ । पर्साको पर्सागढी नगरपालिकामा बाढीले बगाएर एक बालकको मृत्यु भएको छ । पर्सागढी नगरपालिका वडा नं १ बस्ने १० बर्षका निखिल पटेलको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
उत्तरी मकवानपुरको थाहा नगरपालिका – ३ मा महाभीर खोलाले बगाउँदा घाइते भएकी बालिका सञ्चना बलामीको मृत्यु भएको छ । काठमाडौंको मुलपानीमा पनि पहिरोले पुरिएर एकैपरिवारका ३ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बारा घर भइ कागेश्वर मनहरा नगरपालिका, मुलपानी बस्दै आएका नतु यादव, सर्मिला यादव र १० वर्षीय कुन्दन यादव छन् ।
अघोरी बाबा श्रीमतीलाई सात वर्ष जे’ल स’जाय
काठमाडौं । आफूलाई ‘अघोरी बाबा’ बताउने विजय केसीकी श्रीमती शारदा पाण्डेविरुद्ध ‘आपरा’धिक लाभ’ सम्बन्धी मु’द्दामा
खाना पकाउने सिलिन्डर वि’स्फोट हुँदा गम्भीर घाइते
काठमाडौं । बाँकेको कोहलपुर निवासी चूडामणि शर्मा घरमा खाना पकाउने चुल्होमा प्रयोग हुने ग्यास वि’स्फोट
सडकमा नारा जुलुस गर्दैमा नेपाली भुभाग फिर्ता आउँदैन : सभापति देउवा
काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सडकमा जुलुस गर्दैमा देशको भूभाग फिर्ता
यस्तो गम्भीर प्रकरणमा फसे मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव
काठमाडौं । मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव यस्तो गम्भीर आरोपमा प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेका छन् । मा’दक प’दार्थ
परीक्षा केन्द्रबारे त्रिविको अत्यन्तै जरुरी जानकारी [सुचनासहित]
परीक्षालाई लिएर यस्तो आयो त्रिविको नयाँ जानकारी [सुचनासहित]
पढेको कुरा हुबउ याद गर्नको लागि यी ५ तरिका अपनाउँनुहोस्
परीक्षा तालिका सरेकोबारे त्रिविको अत्यन्तै जरुरी जानकारी [सुचनासहित]
स्नातक पढ्दै गरेका प​राजुली लाई भाग्यले ठग्यो, उपचारमा सहयोग गर्न अपिल
यस्तो रहेछ इनारबाट एक्कासी उमालेभन्दा तातो पानी आउनुको कारण [भिडियोसहित]
सीमा विवादपछि नेपाल विरुद्ध चर्चित भारतीय पत्रिकाले यस्तो लेख्यो
We are truly sorry for the inconvenience caused regarding the BBS 4th Year Result
यस्तो बेलामा विष भन्दा खत्तरा हुन्छ अण्डा ? रहेनन् सुभाष यादव
सरकारी क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेहरुका लागि लोक सेवा आयोगमा यति धेरै अवसर